Alshabaab oo raba iney ka aargutaan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Gaashaan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Shalay galab, naftiis hure ka tirsan Alshabaab, ayaa isku qarxiyey kolonyo ka tisan ciidamada Nabad Sugidda ee sida gaarka ah u tababaran ee Gaashaan ee ka howlgala Muqdisho.
Weerarkaas waxaa loo arkay mid Alshabaab uga aargudaneysay ciidamada Gaashaan, kuwaasoo ahaa ragii soo afjaray koox ka tirsan Alshabaab oo 25-kii December 2014 qabsaday qeyb ka mid ah xerada Ciidamada AMISOM ee Muqdisho ee lagu magacaabo Xalane.
Ragga Shabaabka ah oo koobnaa 4 ayaa galabtii Khamiista ee 25-kii bishii hore gudaha u galay xerada AMISOM, waxeyna halkaas ku jireen ilaa subixii Jimcaha ee 26-ka bishaas. AMISOM ayaa ku guuldareystay iney ragaas meesha ka saarto ama leyso.
Subaxdii Jimcaha waxaa AMISOM dalbatay iney usoo gurmadaan ciidamada Gaashaan, kuwaasoo goobta gaaray, islamarkaana wax ka yar labo saac kusoo afjaray howlgalka, sida uu sheegay afhayeenkii xilka laga qaaday ee AMISOM Col. Cali Aadan Xumud.
Wixii waqtigaas ka dambeeyey waxaa hadalheynta dadku aheyd in ciidamada Gaashaan ay ka tababar wanaagsan yihiin AMISOM, iyadoo arrintaasi dhanka kale Alshabaab ku noqday arrin xanuun badan, maadaama aysan fileyn iney jiraan dad Soomaali ah oo ula dagaalami kara si ka daran sida AMISOM oo taangi adeegsada.
Haddaba, Alshabaab, waxey shalay markii ugu horreysay ciidamada Gaashaan la beegsadeen weerar is-qarxin ah, waxeyna sheegeen in halkaas ku dileen 7 iyaga ka mid ah iyo nin sarkaal ah.
Afhayeenka Alshabaab, Sheekh Cali Dheere ayaa warbaahinta u sheegay in weerarkii shalay ahaa mid lagu dhabar jebineyey ciidamada Gaashaan (Alpha Group).
“Mujaahidiinta waxey go’aansadeen iney jarjaraan gacmnaha cadowga, wuxuu Alle waafajiyey howlgal lagu goynayo qeyb ka mid ah gacmaha cadowga, taasoo lagu beegsaday kuwa lagu magacaabo Alpha Group, waxaana laga dilay 7 maleeshiyo, iyo nin sarkaal ah” ayauu yiri Afhayeenka Alshabaab.
Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay weerarka ayaa sheegtay in qaraxaas ay ku dhinteen 4 qof oo rayid ah. dowladda ayaa ka gaabsatay iney ka hadasho khasaaraha gaaray ciidamada la weeraray.
Alshabaab ayaa inta badan beegsada dhinacyada xilligaas ay taagan yihiin ku haya haslita ugu badan, waxaana muuqata in markaan ay ciidamada Gaashaan u arkaan khatarta ugu badan ee soo wajaheysa.
Ciidamada Gaashaan ah ayaa ciidan uu tababaray Mareykanka, islamarkaana uu qalabeeyey, mushaarna siiyo, waxaana la sheegaa iney xerooyin ku leeyihiin agagaarka garoonak diyaaradaha Aadan Cadde.
Ciidamadan oo aan intooda badan bulshadu aqoonin maadaama ay wajiyada duubtaan sida Alshabaab, ayaa hormuud ka ahaa howlgaladii Alshabaab weeraray lagu laayey madaxtooyada Soomaaliya, maxkamadda gobolka Banaadir, xarrunata baarlamaanka iyo xarrunta UNDP.